Search & Share: Health
1. Drink plenty of water.2. Eat breakfast likeaking, lunch likeaprince and dinnerlikeabeggar.3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat lessfood that is manufactured in plants.4. Live with the3E's -- Energy, Enthusiasm, and Empathy.5. Make time for prayer.6. Play more games.7. Read more books than you did in 2011.8. Sit in silence for at least 10 minutes each day.9 Sleep for7hours.10. Takea10-30 minutes walk every day. And while you walk, smile.
11. Don't compare your life to others'. You have no idea whattheir journey is all about.12. Don't have negative thoughts or things you cannot control.Instead invest your energy in the positive present moment.13. Don't over do. Keep your limits.14. Don't take yourself so seriously. No one else does.15. Don't waste your precious energy on gossip.16. Dream more while you are awake.17. Envy isawaste of time. You already have all you need.18. Forget issues of the past. Don't remind your partner with his/hermistakes of the past. That will ruin your present happiness.19. Life is too short to waste time hating anyone. Don't hateothers.20. Make peace with your past so it won't spoil the present.21. No one is in charge of your happiness except you.22. Realize that life isaschool and you are here to learn. Problemsw are simply part of the curriculum that appear and fade away likealgebra class but the lessons you learn will lastalifetime.23. Smile and laugh more.24. You don't have to win every argument. Agree to disagree.
25. Call your family often.26. Each day give something good to others.27. Forgive everyone for everything.28. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6.29. Try to make at least three people smile each day.30. What other people think of you is none of your business.31. Your job won't take care of you when you are sick. Yourfamily and friends will. Stay in touch.
32. Do the right thing!33. Always speak the truth even if it leads to your death.34. GOD heals everything.35. However good or badasituation is, it will change.36. No matter how you feel, get up, dress up and show up.37. The best is yet to come.38. When you awake alive in the morning, thank GOD for it.39. Your Inner most is always happy. So, be happy.
40. Please like me & Forward this to everyone you care about.
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေတွေဟာ အမြဲပြောင်ဝင်းနေပြီး ညစ်နေသလိုလို ထင်ရတယ်နော်။ အရေပြားကလည်း ထူပြီးကြမ်းတယ်။ ချွေးပေါက်ကျယ်တွေ၊ ၀က်ခြံတွေနဲ့ အသားအရောင်မညီတာတွေလည်း တွေ့ရတတ်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ အရေပြားက အဆီဂလင်းလေးတွေဟာ ပုံမှန်ထက်ပိုအလုပ်လုပ်ပြီး အဆီတွေကို လိုတာထက်ပိုထုတ်လို့ပဲနော်။ မျက်နှာရဲ့ တချိူ့နေရာက အဆီပြန်ပြီး ကျန်တဲ့နေရာမှာ အသားဟာ ပုံမှန်(သို့) ခြောက်သွေ့နေရင်တော့ ပေါင်းစပ်အသားအရေပါပဲ။
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေ ပိုင်ရှင်တွေမှာ မကောင်းတဲ့အချက်တွေများပေမယ့် အရမ်းကောင်းတဲ့ အချက်လည်းရှိတယ်လေ။ ဒါကတော့ တခြားအသားအရေပိုင်ရှင်တွေထက် ဇရာဟာနှေးကွေးခြင်းပါပဲ။
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေအကြောင်းကို သေချာသိထားမယ်ဆိုရင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေလည်းသိပြီး သေချာလိုက်နာမယ်ဆိုရင် အဆီပြန်တဲ့အသားအရေရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး ပိုနုပျိုလှပလာမှာနော်။ ဒီတော့ အဆီပြန်နေလို့ စိတ်ညစ်မနေပဲ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ရအောင်..။
♣ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ ♣
အဆီပြန်ခြင်းဟာ ဟော်မုန်းများလှတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ အများဆုံးကြုံတွေ့ရတယ်နော်။ ယျေဘုယအားဖြင့်တော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အဆီပြန်တာလည်း တဖြည်းဖြည်းနည်းလာပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ သွေးဆုံးချိန်မှာလည်း ဟော်မုန်းပမာဏမညီမျှမူတွေကြောင့် အဆီဂလင်းတွေ အရမ်းအလုပ်လုပ်ပြီး အဆီပြန်တတ်ပါသေးတယ်။
♣ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းရမယ့်နည်းလမ်းများ ♣
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေဟာမျက်နှာကိုသေချာသန့်စင်ပေးရတယ်နော်။ ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်မနေအောင် မျက်နှာသစ်တိုင်း ရေများများနဲ့ သစ်ပေးပါ။ ရေနွေးနဲ့သစ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆီပြန်တာနည်းသွားအောင်ဆိုပြီး အပြင်းစားမျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေတော့ မသုံးလိုက်ပါနဲ့။ သင့်မျက်နှာအရေပြားက ပုံမှန်ရှိသင့်တဲ့ အဆီတွေပါ ပါသွားပြီး အရေပြားက အဖတ်တွေတောင် ကွာလာနိုင်လို့ပါပဲ။ မျက်နှာကို အလွန်အကျွံသန့်စင်မိတော့ တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိူးတွေပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ သဘာဝအဆီတွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့ အဆီဂလင်းလေးတွေက ပိုအလုပ်လုပ်လို့ သင့်မျက်နှာ ပိုပြီးတော့တောင် အဆီပြန်လာအုံးမှာပါ။ သင့်အသားအရေကို အလွန်အမင်းသန့်စင်မိနေပါသလားမှာ ဖတ်ကြည့်နော်။
သင့်မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း မျက်နှာအရေပြားအရမ်းတင်းပြီး ခြောက်သွေ့သွားစေတဲ့ အလှကုန်တွေကို ရှောင်ပါ။ ဒီပစ္စည်းတွေက အရေပြားရဲ့ အပေါ်ယံလွှာကိုကျူံ့သွားစေပြီး ချွေးပေါက်တွေကနေ အဆီတွေ ထွက်လာတာကို တားဆီးပေးတယ်လေ။ အဲဒီအခါ အဆီဖုတွေ ၀က်ခြံတွေ ဖြစ်လာတော့တာပေါ့။ အဲဒီတော့ သင့်အသားအရေနဲ့လည်း အဆင်ပြေမယ့် အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးကို သေချာရွေးချယ်သုံးစွဲပေးပါ။ သင့်မျက်နှာလေး နူးညံ့စိုပြေနေအောင် မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း Oil Free Moisturizer တစ်ခုခုကိုသုံးစွဲပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
တစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ်ထက်ပိုပြီး မျက်နှာမသစ်မိပါစေနဲ့။ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါမှာ လက်ထိပ်လေးတွေနဲ့
စက်ဝိုင်းသဏ္ဍန်အပေါ်ကို ပင့်တင်နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်ကို မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ တိုက်ရိုက်မပွတ်လိုက်ပါနဲ့။ ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်သွားစေနိုင်လို့ပါ။ မျက်နှာသစ်ဆေးကို လက်ဝါးပေါ်အရင်တင်ပြီး ရေနဲနဲနဲ့ ပွတ်ပြီးတော့မှ မျက်နှာပေါ်တင်ပါ။ မျက်နှာသစ်ကြသူတိုင်းအတွက်မှာ ၀င်လေ့လာကြည့်ပါအုံးနော်။
တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် မျက်နှာပေါင်းတင်ပေးရမယ်နော်။ အဆီပြန်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ရွံ့စေးပေါင်းတင်ဆေးက အကောင်းဆုံးပဲလေ။ ဒါပေမယ့် သင်က ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့ အဖြူရောင် (သို့) ပန်းရောင်ရွံ့စေးတွေကို သုံးပေးပါ။
မိတ်ကပ်နဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်တဲ့အခါ အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ ဒါပေမယ့် အယ်ကိုဟောလ်ပါတာတွေကိုတော့ ဝေးဝေးကရှောင်နော်။
မိတ်ကပ်ကို ရေဓာတ်ကို အခြေခံပြီး ထုတ်ထားတဲ့မိတ်ကပ်က အဆီပြန်တဲ့အသားအရေတွေအတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ မိတ်ကပ်ရောင်ကို ကိုယ့်အသားအရောင်ထက် တဆင့်ပိုလင်းတာကို လိမ်းပါ။ မဟုတ်ရင် အဆီပြန်လာတဲ့အခါ မျက်နှာက ညိုပြီးညစ်သွားမှာ။ ပြီးတော့ အဆီပြန်တဲ့သူတွေ ပေါင်ဒါကို အားကိုးလို့ရတယ်နော်။ ပေါင်ဒါမှုန့်လေးတွေက အဆီပြန်တာကို ထိန်းပေးနိုင်တယ်လေ။ အဲ့ဒီတော့ မနက်မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးတာနဲ့ ပေါင်ဒါလိမ်းပါ။ လိုအပ်ရင် နေ့လည်တကြိမ် ထပ်လိမ်းပါ။ Mineral Loose Powder တွေက ပိုနူးညံ့ပြီးချွေးပေါက်တွေလဲ မပိတ်နိုင်တာမို့ ရွေးချယ်သင့်တယ်နော်။
♣ သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ အသားအရေကိုထိန်းသိမ်းမယ် ♣
(၁) မျက်နှာမသစ်ခင် နာရီဝက်အလိုမှာ သံပရာရည်နဲ့ သခွားရည် လ္ဘက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်စာစီကို ရောပြီး လိမ်းပေးပါ။
(၂) မိတ်ကပ်လိမ်းပြီး မိတ်ကပ်တွေ ကွက်မနေစေချင်ရင်တော့ သခွားရည်အနည်းငယ်ကို မျက်နှာရဲ့ အရမ်းအဆီပြန်တဲ့နေရာမှာ လိမ်းပေးပါ။ သခွားရည်သေချာခြောက်သွေ့သွားမှ မိတ်ကပ်ထပ်လိမ်းပေါ့။
(၃) အရမ်းအဆီပြန်တဲ့သူတွေကတော့ ရွံစေးနဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်လို့ ရတယ်နော်။ အစိမ်းရောင်ရွှံ့စေးမှုန့်နဲ့ ပျားရည်လက်ဘက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစီရောမွှေပါ။ မျက်လုံးတ၀ိုက်ကို ရှောင်ပြီး မျက်နှာအနှံ့လိမ်းပေးပါ။ ၁၅
မိနစ်ကြာတဲ့အခါ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ။ တစ်ပတ်ကို ၃ ကြိမ်လုပ်ပေးပါ။ ဒီနည်းကတော့ အရမ်းအဆီပြန်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲနော်။
(၄) သံပရာရည်နဲ့ ရေကို ဆတူရောပြီး မျက်နှာမှာ လိမ်းပေးပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အခါ ရေနွေးလေးနဲ့
မျက်နှာသစ်ပါ။ ပြီးတော့ ရေအေးလေးနဲ့ မျက်နှာထပ်သစ်ပါ။
♣ အာဟာရအကြံပြုချက် ♣
- အသားဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို စားပါ။ (အသား၊ ငါး၊ ပဲ)
- လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအရွက်တွေ များများစားပေးပါ။
- သကြား၊ ဆားကို လျှော့စားပါ။
- ဗီတာမင် B2 ချိူ့တဲ့ရင်လည်း အဆီပြန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Vit B2 ကြွယ်ဝတဲ့ ပဲအမျိူးမျိူးနဲ့
Royal Jelly စားသုံးပေးပါ။ တဆေး၊ ဂျုံနဲ့ ကလီစာတွေမှာလည်း Vit B2 နဲ့ B5 ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။
- အသားအရေမှာ ရေဓာတ်ပြည့်ဝပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ဖို့ ရေကိုလည်းများများသောက်ပါ။
- အရက်၊ အချိူရည်၊ ချောကလက်နဲ့ ရယ်ဒီမိတ်အစားအစာတွေကိုရှောင်ပါ။
- အဆီလျှော့စားပါ။ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ဆီကြော်မုန့်တွေ၊ ကြာနေတဲ့ စားစရာတွေ၊ တိရစ္ဆာန်အဆီတွေနဲ့ ၀က်သားရှောင်ပါ။ ကြော်ချက်ရာမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီကိုသုံးပါ။ သံလွင်ဆီကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
♣ အထွေထွေအကြံပြုချက် ♣
- ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ ဆေးလိပ်သောက်ရင် ချွေးပေါက်တွေကို ကျယ်စေပြီး အရေပြားအတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။
- တကိုယ်လုံးကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ သွေးလည်ပတ်မူကို ကောင်းစေပြီး အရေပြား
ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
- Evening Primrose Oil မှာ Gamma Linolenic acid (FLA ) ပါဝင်လို့ အရေပြားရဲ့ ဆဲလ်တွေကို သန်စွမ်းစေပြီး ၊အစိုဓာတ်လည်းဖြည့်တင်း ပေးနိုင်လို့ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
- အရေပြားက ဆဲလ်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်တာဟာ အိပ်ချိန်မှာ လုပ်ဆောင်တာပါ။ ဒါကြောင့် အိပ်ရေး၀၀
- တကယ်လို့ အဆီပြန်တာက ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မသက်သာပဲ ကြည့်မကောင်းအောင်ဆိုးနေပြီဆိုရင်တော့ အရေပြားရောဂါဖြစ်နိုင်တာမို့ အရေပြားအထူးကုတွေနဲ့ ပြသသင့်တယ်နော်။
အပေါ်ကနည်းလေးတွေအတိုင်း သေချာလိုက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ရင်နှင်းသူငယ်ချင်းလေးတွေ မျက်နှာအဆီပြန်တာတွေ သက်သာသွားပြီး မျက်နှာလေးက ကြည်လင်ဝင်းပလာမှာပါ။
Myanmar Health & Beauty
( ရင်နှင်းငယ် )
လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ ကိုယ်သင်းနံ့လေးကောင်းမွန်မှသာ မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုရှိပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး မှာလည်း အောင်မြင်မှာပါ။ တချို့ကတော့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု နည်းပြီး အမွှေးနံ့သာတွေနဲ့ဖုံးအုပ်တတ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တကယ့်စစ်မှန် တဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ကိုတော့ မပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါဘူး။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှအနံ့ဆိုးထွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း တွေထဲမှာ လိင်အမျိုးအစား အလိုက်လည်းကွာခြားပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် ချွေးနံ့ပိုထွက် လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါတွေအပြင်နေ့စဉ်စားသုံး နေတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကလည်းချွေးနံ့ထွက်စေတဲ့ ကိစ္စတွေပါပဲ။
လူကတော့ စမတ်ပဲ။ စမဲက ဖျက်နေတာ
ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း၊ ဆေးပြင်းပြင်း များမှီဝဲခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ ဇင့်ဓာတ်လျော့နည်းခြင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့် ရှင်းမှု မရှိခြင်းတွေကတော့ ခန္ဓာကိုယ် မှအနံ့ဆိုးထွက်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာတွေလို့ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
ချွေးနံ့သက်သာစေမည့် အစားအစာများအမျှင်ဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာများ၊ ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ အစိမ်းရောင်ခြယ်အသီးအနှံများ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့ မုန်လာဥနီကို နေ့စဉ်ပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းက ကိုယ်သင်းရနံ့ ကောင်းအောင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။
ချွေးနံ့သက်သာစေမည့် အပြုအမူများ ချွေးနံ့သက်သာစေဖို့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ နေ့စဉ် ရေမှန်မှန်ချိုးပြီး တစ်နေ့အဝတ် အစားတစ်နေ့ပုံမှန်လျှော်ပါ။ အဝတ်အစားများကို မလျှော်ဘဲထပ်တလဲလဲ ဝတ်ဆင်ခြင်းကိုတော့ လုံးဝရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။ အခါအားလျော်စွာ ချွေးနံ့ထွက်စေတဲ့ နေရာများကို သန့်စင်တဲ့အဝတ်စ၊ တစ်သျှူးစတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ရေများများသောက်ခြင်းကလည်း ချွေးနံ့ဆိုးများသက်သာစေတဲ့ နည်းလမ်းပါပဲ။ ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာအေးပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ အဝတ်အစားများကိုသာဝတ်ဆင်ပါ။ ဒါပေမယ့်လက်ပြတ်အင်္ကျီဝတ်ဆင် ခြင်းကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ချွေးနံ့ကိုအတိုင်းသာ ပေါ်လွင်စေလို့ပါပဲ။
- ရှာလကာရည်ကတော့ ချွေနံ့အတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးဝါးကောင်းပါပဲ။ ဂွမ်းနဲ့တို့ပြီးချွေးနံ့ထွက်စေတဲ့ ချိုင်းကြားနေရာတွေကို သုတ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ချိုင်းမွေးနုတ်ပြီး ဒါမှမဟုတ် ရိတ်ပြီး စမှာတော့ ရှာလကာ ရည်ကို မသုံးဖို့သတိပြုပါ။
- မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါနဲ့ ရှောက်ရည်၊ သံပရာရည် စတာရောစပ်ပြီးသုတ်လိမ်းပေးခြင်းကလည်း ချွေးနံ့သက်သာစေပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုလည်း သေစေနိုင်ပါတယ်။
- ရေချိုးကန်ထဲမှာ ခရမ်းချဉ်သီးရည် ဒါမှမဟုတ် ပျားရည် အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့် ရေစိမ်ပေးခြင်းကလည်း ကိုယ်သင်းနံ့မွှေးစေနိုင်ပါတယ်။ အာလူးကို ပါးပါးလှီးပြီးချိုင်းကြားမှာ ကပ်ပေးပါ။ ခြောက်သွေ့သွားတဲ့အခါ ခွာပြီး ရေဆေးပေးရင် တစ်နေ့တာလုံး ချွေးနံ့ကင်းစင်စေမှာပါ။
- ခန္ဓာကိုယ် အနံ့ဆိုးထွက်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ခြေဆီလို့ခေါ်တဲ့ ခြေထောက်မှ ထွက်တဲ့ ချွေးနံ့ကလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခြေဖဝါးနဲ့ ခြေချောင်းလေးများကို နေ့စဉ် ချေးချွတ် သန့်စင်ပေးပြီး ဖိနပ်စီးရာမှာလည်း လေဝင် လေထွက်ကောင်းတဲ့ ဖိနပ်မျိုးကိုစီးပါ။
By: Good Health
သူငယ်ချင်းများအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေရနိုင်တဲ့ သံပုရာသီးရဲ့ အလှအပအတွက်ရော ကျန်းမာရေးအ
တွက်ပါ အသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြဝေငှလိုက်ပါတယ်။ 8 Day ဂျာနယ်မှကူးယူဖေါ်ပြဝေငှပေးလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်လည်းပြည်ပမှာ
အလွယ်တကူရနိုင်မဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းလေးများမှ အကျိုးအာနိသင်ရှိသော ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သောဒီ
လိုအသီးအနှံများအကြောင်းကို စုဆောင်းထားလို့ ပြန်လည်ဝေငှပေးနိုင်တာပါ။တော်ယုံတန်ယုံ နှာစေးချောင်းဆိုး ဗိုက်နာ ခေါင်းကိုက်
ကတော့ ဒီဆေးနည်းလေးတွေထဲကတစ်နည်းနည်းနဲ့ ပျောက်သွားတာပါဘဲ။အမှန်တကယ်လည်း အစွမ်းထက်ပါတယ်။သိတဲ့အတိုင်းလေ
ပြည်ပမှာဆေးဖိုးဝါးခက မြင့်တယ်ဆိုတော့ ချွေတာရာလည်းရောက်ပါတယ်။
Lemon ရောင်ဟာ အရောင်တွေထဲမှာ အပျော်ဆုံးအရောင်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ သစ်သီးထဲမှာတော့ သံပုရာသီးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ထိခိုက်ရှနာမိတဲ့နေရာမှာ ပေါက်ဖွားခိုအောင်းနေလေ့ရှိတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား ပိုးမွှားတွေကို ဖျက်ဆီး စေနိုင်တဲ့ သတ္တိရှိပါတယ်။ နာကျင်မှု ခံစားနေရတဲ့အနာ ဒဏ်ရာအတွက်လည်း သံပုရာသီးရည်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် သံပုရာသီးဟာ ဆီးချိုကိုလည်း မဖြစ်အောင် တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ သစ်သီးဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးပွခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ရုံမက ပျောက်ကင်း စေနိုင်တဲ့ သတ္တိလည်း ရှိပါတယ်။
သံပုရာသီးဟာ သွားကို ဖြူစေပါတယ်။ သံပုရာသီးအခွံကိုဆား (တကော်စာ)နဲ့ ရောပြီး ပွတ်ပေးရင် သွားကို ဖြူစေရုံတင်မကဘူး။ တောက်ပစေပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့ မကောင်းတာလည်း ပျောက်စေပါတယ်။ သွားကိုက်နေရင်လည်း သံပုရာရည်နဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။
မျက်နှာလိမ်းခရင်မ်တစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်သောက်ဇွန်း) နဲ့ လိမ္မော်ရည်၊ ပျားရည်တို့ကို ရောစပ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။ တစ်ပတ်လောက်လိမ်းရုံနဲ့ သိသာ ထင်ရှား ပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မယ်။
အုန်းရည်လေးဇွန်း (စားပွဲတစ်ဇွန်း)နဲ့ သံပရာရည်တို့ ရောစပ်ပြီး တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် လိမ်းပေးရင် ဆံပင်ကျွတ်တာ ပျောက်ကင်း စေပါတယ်။
ကြက်ဥအကာရည်နှင့် သံပရာရည် (သံပုရာသီးတစ်လုံးစာ) တို့ရောပြီး ဆံနွယ်အမြစ်ကနေ လိမ်းပေးပါ။ တစ်နာရီခန့်ကြာမှ ရေနဲ့ ပြန်ပြီးဆေးကြောပေးပါ။ တစ်လလောက် လုပ်ပေးရုံနဲ့တင် ဦးရေပြားသန့်ရှင်းပြီး ဗောက်၊ ဒက်တို့ ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်။
ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံးကိုယူပြီး ချေပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သံပုရာရည် တစ်စက်နှစ်စက်နဲ့ ချေထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးတို့ကို ရောစပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ မျက်နှာနဲ့ လက်ကို လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရေကို ချောမွေ့ သန့်ရှင်း စေပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ပျားရည်တစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဆီနဲ့ရောပေးပါ။ ပြီးရင် သံပုရာရည်တစ်စက် လောက်နဲ့ ထပ်ရောပြီး လက်တွေ၊ တံတောင်ဆစ်တွေ၊ ခြေဖနောင့်တွေနဲ့ ကြမ်းထော်နေတဲ့နေရာတွေကို လိမ်းပေးပါ။ လိမ်းပြီးရင် ဆယ်မိ နစ်လောက် စောင့်ပေးပါ။ သံပုရာသီးဟာ အရေပြားအလှအပအတွက် အကောင်းဆုံးပေးစွမ်းစေနိုင်တဲ့ သစ်သီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသ ဖြင့်် ဝက်ခြံနဲ့ ယားနာတွေကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့သတ္တိရှိပါတယ်။ မှဲ့ခြောက်တွေကိုလည်း ပျောက်ကင်း စေပါတယ်။ သံပုရာရည်နဲ့သာ လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သံပုရာရည်နှစ်ဇွန်း (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)၊ နနွင်းမှုန့် ဇွန်းဝက်ခန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း) တို့ကိုယူပါ။ သင်္ဘောသီးစိတ်ကိုချေပြီး ပျော့ဖတ်သဖွယ်ရအောင်လုပ်ပါ။ ယင်းသင်္ဘောသီး ရည်ကို သုံးဇွန်းခန့် ယူပါ။ အားလုံးကို ရောစပ်ပြီး မျက်လုံးကလွဲရင် မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကို လိမ်း ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ ခန့်ကြာအောင် စောင့်ပေးပါ။ ပြီးမှ ရေနဲ့ တစ်ဖန် ပြန်ဆေးကြောပေးပါ။
သံပရာသီးအခွံနဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်ရေနဲ့ ဆေးပေးပါ။ နည်းနည်းတော့ကြာပေမယ့် အရေပြားကို သန့်စင်သွားပြီး တောက်ပြောင်ဝင်း လက်လာပါလိမ့်မယ်။ တချို့ အသားအရေ တွေဟာ မှောင်မှောင်မှိုင်းမှိုင်းနဲ့ ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အရောင်အဝါ လင်းလက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သံပုရာသီး တစ်လုံးရဲ့ အရည်နဲ့ မျက်နှာမကျန် ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ အိပ်ရာမဝင်ခင် ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ မနက်ကျမှ ရေချိုးပေးပါ။ အရေပြားကို တောက်ပြောင်ရွှန်းလဲ့စေပြီး နူးညံ့စေပါတယ်။ အိပ်ရာတာ စေးထန်းထန်းနဲ့ မအိပ် ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ချိုးမယ့်ရေထဲ သံပုရာရည်တစ်ခွက်တစ်ဝက်ခန့် ထည့်ပြီး အဲဒီ့ရေနဲ့စိမ်ချိုးပေးပါ။
သံပုရာသီးစိတ် (သို့) သံပရာရည်ကို ရေထဲရောပြီး လက်ကိုစိမ်ပေးပါ။ လက်သည်းမှာ ပေနေတဲ့အစွန်းအထင်းတွေကို ချက်ခြင်းချေး ချွတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင် လက်သည်းကို ပြန်ဆိုးမယ်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီးတောက်ပြောင်လာပါလိမ့်မယ်။သံပုရာရည်ထဲ လက်သည်း ခြေသည်းကို ဆယ်မိနစ်ခန့် စိမ်ပေးပါ။ ပြီးလို့ရှိရင် ဘရက်ရ်ှနဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းကို ပြန်ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ပြီးမှ ရေနွေး နွေးနဲ့ ဆေးကြောပေးပါ။ ဒီနည်းဟာ လက်သည်းကို သန်စွမ်းစေပြီး တောက်ပြောင်စေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဗင်နီဂါဖြူ ဇွန်းဝက်ခန့်နဲ့ ရေနွေးတစ်ဝက်တို့ ရောပြီး ဘရက်ရ်ှနဲ့ တိုက်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
သံပုရာရည်တစ်ခွက်စာ (ကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်စာ)၊ သစ်ဂျပိုး(အနံ့အတွက်)၊ သံလွင်ဆီ နှစ်ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)၊ နွားနို့လေးပုံတစ်ပုံ (ခွက်တစ်ခွက်)၊ ရေသန့် (ရေကို သင့်တော်သလို ထည့်နိုင်ပါတယ်၊ အနည်း၊ အများ အရေးမကြီးပါ) တို့ရောစပ်ပေးပါ။ တကယ်လို့ သစ်ဂျပိုးမသုံးချင်ဘူးဆိုရင် တခြားအနံ့ ပစ္စည်းတို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ နှင်းဆီပွင့်ချပ် တို့ဖြင့်လည်း အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးရော စပ်ပြီးရင်တော့ အဲဒီ့အရည်ကို ခြေထောက်စိမ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသွားမှ ရေနဲ့ ဆပ်ပြာ (Mild) နဲ့ သေချာဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ တစ်ပတ်လောက်လုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ခြေထောက် အသားအရေဟာ သိသိသာသာချောမွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
နွေအပူမှာ ချွေးဆုနေခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသစ်သီး
ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့နွေရာသီလို ဥတုမျိုးမှာ ချွေးထွက်သက်သာအောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်ပူသက်သာအောင်လုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သံပုရာ သီးရည်ကို ပျားရည်တစ်ဇွန်းနဲ့ရောပြီး သောက်ပေးပါ။ သွေးလေလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေရုံမျှမက ချွေးထွက်ခြင်းကိုလည်း သက် သာစေပါတယ်။ သံပုရာသီးထဲမှာ ပါရှိတဲ့ ဂလူးကိုစ့်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ချွေးထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် အေးမြအောင်လည်း စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတပြည့်ဝပြီး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ ဆု